Bible Mu Nsɛm Ngo Bepɔw no So - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
YESU ni wɔ Ngo Bepɔw no so. Mmarima baanan a wɔka ne ho no yɛ n’asomafo. Wɔyɛ Andrea ne Petro a wɔyɛ anuanom, ne Yakobo ne Yohane a wɔn nso yɛ anuanom. Onyankopɔn asɔrefi a na ɛwɔ Yerusalem no na wuhu wɔ hɔ no.
Ná nnanu atwam fi bere a Yesu traa afurum ba so baa Yerusalem no. Ɛyɛ Benada. Saa da no anɔpa bere mu no Yesu kɔɔ asɔrefi hɔ. Ɛhɔ no asɔfo no bɔɔ mmɔden sɛ wɔbɛkyere Yesu akum no. Nanso na wosuro efisɛ na nkurɔfo no pɛ Yesu asɛm.
Yesu frɛɛ nyamesom mpanyimfo no ‘Awɔ ne awɔ mma!’ Afei Yesu kae sɛ Onyankopɔn bɛtwe wɔn aso esiane nneɛma bɔne a wɔayɛ no nyinaa nti. Ɛno akyi no Yesu baa Ngo Bepɔw no so, na asomafo baanan yi fii ase bisabisaa no nsɛm. Wunim asɛm a wɔrebisa Yesu no?
Asomafo no rebisabisa nsɛm a ɛfa daakye ho. Wonim sɛ Yesu bɛma bɔne nyinaa aba awiei wɔ asase so. Nanso na wɔpɛ sɛ wohu berea eyi bɛba. Bere bɛn na Yesu bɛba bio sɛ Ɔhene?
Na Yesu nim sɛ sɛ ɔsan ba bio a n’akyidifo a wɔwɔ asase so rentumi nhu no. Nea enti a ɛte saa ne sɛ ɔsoro na ɔbɛtra, na wɔrentumi nhu no wɔ hɔ. Enti Yesu kaa nneɛma a ebesisi asase so bere a ofi soro redi tumi sɛ Ɔhene no binom kyerɛɛ n’asomafo no. Dɛn ne nneɛma yi binom?
Yesu kae sɛ ɔko akɛse bɛba, na nnipa pii bɛyareyare na ɔkɔm ade wɔn, nsɛmmɔnedi bɛkɔ anim pii, na asasewosow akɛse bɛba. Yesu kae nso sɛ wɔbɛka Onyankopɔn ahenni ho asɛmpa no wɔ asase so baabiara. So yɛahu saa nneɛma yi wɔ yɛn bere so anaa? Yiw! Enti yetumi hu sɛ Yesu redi hene wɔ soro. Ɛrenkyɛ ɔbɛma nneɛma bɔne nyinaa aba awiei wɔ asase so.
Wɔ mfonini no mu no, mmarima yi mu hena ne Yesu, na henanom na wɔka ne ho no?
Dɛn na asɔfo no bɔɔ mmɔden sɛ wɔbɛyɛ Yesu wɔ asɔrefi hɔ, na dɛn na ɔka kyerɛɛ wɔn?
Dɛn na asomafo no bisaa Yesu?
Adɛn nti na Yesu kaa nneɛma bi a ebesisi asase so bere a ɔredi tumi sɛ Ɔhene wɔ soro no ho asɛm kyerɛɛ n’asomafo no?
Dɛn na Yesu kae sɛ ebesisi ansa na wayi bɔne nyinaa afi asase so?
Kenkan Mateo 23:1-39.
Ɛwom, Kyerɛwnsɛm no kyerɛ sɛ wiase abodin a wɔde bedi dwuma no betumi afata, nanso dɛn na Yesu nsɛm a ɛwɔ Mateo 23:8-11 da no adi wɔ abodin a wɔde hoahoa obi wɔ Kristofo asafo no mu no ho? (Aso. 26:25; Rom. 13:7; 1 Pet. 2:13, 14)
Dɛn na Farisifo no de dii dwuma de bɔɔ mmɔden sɛ wɔde besiw nkurɔfo kwan na wɔammɛyɛ Kristofo, na ɔkwan bɛn so na nyamesom akannifo de akwan a ɛtete saa ara adi dwuma wɔ nnɛ mmere yi mu? (Mat. 23:13; Luka 11:52; Yoh. 9:22; 12:42; 1 Tes. 2:16)
Kenkan Mateo 24:1-14.
Ɔkwan bɛn so na wɔasi hia a boasetɔ ho hia no so dua wɔ Mateo 24:13?
Dɛn na asɛm “awiei no” a ɛwɔ Mateo 24:13 no kyerɛ? (Mat. 16:27; Rom. 14:10-12; 2 Kor. 5:10)
Kenkan Marko 13:3-10.
Dɛn asɛm na ɛwɔ Marko 13:10 a ɛkyerɛ sɛnea ahenni ho asɛmpaka adwuma no gye ntɛmpɛ, na ɛsɛ sɛ Yesu nsɛm no ka yɛn ma yɛyɛ dɛn? (Rom. 13:11, 12; 1 Kor. 7:29-31; 2 Tim. 4:2)
Awieeɛ No Abɛn?
Kenkan nneɛma nnan bi a Bible ka sɛ ɛbɛbom asisi a ɛbɛma yɛahu sɛ yɛwɔ awieeɛ bere no mu.